Ahoana ny fametrahana WhatsApp amin'ny Mac | Avy amin'ny mac aho
Ahoana ny fametrahana WhatsApp amin'ny Mac
Efa nolazaiko foana ary hotohizako foana fa izay nataon'i WhatsApp hitondra ny fampiharana azy amin'ny solosaina dia botch. Heveriko fa satria ny mpamorona rehetra izay te-hitondra ny fangatahany amin'ny rafi-birao dia nanao tsara, nandefa mpanjifa teratany navitrika niaraka tamin'ny ambiny amin'ireo tranga izay mety amin'ny takelaka na finday smartphone (mandeha amin'ny fotoana iray ihany). Na izany na tsy izany, ny mpamorona ao ambadiky ny fampiharana fandefasan-kafatra be mpampiasa eran'izao tontolo izao dia nanao izay fantatra amin'ny hoe WhatsApp Web.
Fa inona ny Web WhatsApp? Azonao atao ny milaza fa ny tolo-kevitra WhatsApp dia a taratry ny zava-mitranga amin'ny finday. Amin'ny alàlan'ny fidirana amin'ny tranokalan'ny serivisy na fampiharana mifanentana dia azontsika atao ny mampifandray ny ohatra an-telefaonantsika amin'ny tranokala fitetezana tranonkala izay ho toy ny hoe varavarankely izay mampiseho izay mitranga ao amin'ny WhatsApp an'ny finday.
Manana tombony kokoa noho izay ataon'ny rindranasa hafa ve izany? Eny, tsy afaka mieritreritra na inona na inona aho. Mifanohitra amin'izany no izy: tokony hitandrina isika satria afaka manadino fa mifandray amin'ny drafitry ny angovo finday isika ary mandefa sary sy horonan-tsary lehibe. Na ahoana na ahoana, tianay bebe kokoa na latsaka, amin'ity lahatsoratra ity dia hanazava ny fomba fiasan'izy ireo WhatsApp Web amin'ny Mac.
1 Ireo browser dia mifanaraka amin'ny WhatsApp Web
2 Ahoana ny fampiasana WhatsApp Web amin'ny Mac
3 Fampiharana hampiasa WhatsApp amin'ny Mac
4 Fanitarana ny browser hampiasa WhatsApp
5 Fehiny: mendrika apetraka amin'ny WhatsApp ve ny WhatsApp?
Ireo browser dia mifanaraka amin'ny WhatsApp Web
Amin'ity fotoana ity dia hanohy hanazava amin'ny inona aho Mpijery Mac no hiasany WhatsApp Web (ary tsy hiombon-kevitra amin'ny fomba nataon'izy ireo intsony aho). Raha te hampiasa an'ity fitaovana ity dia mila mampiasa iray amin'ireto tranonkala manaraka ireto izahay:
Manoro hevitra ny WhatsApp mba hampiasa ny kinova farany isaky ny mpitety taloha. Etsy ankilany, tsy mila taitaitra isika raha tsy mampiasa ny iray amin'ireo lisitra, satria maro amin'ireo izay misy no miankina amin'izy ireo. Ohatra, izao dia manoratra avy amin'i Vivaldi aho, ilay mpitety tranonkala vaovao avy amin'ny CEO taloha an'ny Opera, izay miorina amin'ny Chromium (izay mifototra amin'ny Chrome) ary miasa tsy misy olana.
Ahoana ny fampiasana WhatsApp Web amin'ny Mac
Ny fampiasana WhatsApp Web dia tena tsotra. Ireto manaraka ireto ihany no hataontsika:
Raha ny lojika, ny dingana voalohany dia ny fanokafana ny browser (na ny fampiharana, araka izay hazavainay amin'ny teboka manaraka) raha tsy ananantsika misokatra.
Manaraka izany dia mankany amin'ny pejy izahay whatsapp.com, izay ahitantsika kaody QR.
Tokony hizaha ny kaody QR izay ho hitantsika amin'ny finday, noho izany dia mandray ny finday avo lenta isika ary manokatra WhatsApp.
Ao amin'ny WhatsApp (ho an'ny iOS) dia tsy maintsy mandeha any amin'ny tranonkala setting / WhatsApp izahay. Raha vantany vao kasaintsika ny safidy, dia ho hitantsika ny interface izay ahafahantsika mijery ny kaody QR.
Farany, tsy maintsy mifantoka amin'ny kaody QR isika ary, rehefa mifandray, afaka mamonjy ny finday avo lenta.
Ny zavatra voalohany ho hitantsika dia sary toa ilay iray amin'ireto sary manaraka ireto:
Amin'ny alàlan'ny fanindriana ny resaka mivelatra, ahoana no fomba hafa, hidirantsika izany resaka izany ary ho hitantsika ireo hafatra rehetra mbola ananantsika amin'ny findaintsika, izay misy sary, horonan-tsary, naoty an-peo, sns. Raha ny manokatra chat vaovao no tadiavintsika dia tsy maintsy mikasika ilay kisary «bubble miteny» (lahatsoratra) fotsiny isika. Satria mifamatotra amin'ny finday avo lenta ny mpizahatany ary mifamatotra amin'ny fandaharam-potoananay ny finday avo lenta, afaka manokatra chat vaovao amin'ireo olona mifandray aminay izay mampiasa WhatsApp izahay. Raha te handefa rakitra isika dia mila fotsiny andao hisintona eo am-baravarankely ny resaka.
Misy bokotra misy safidy koa. Ity bokotra ity dia misy teboka telo mitsangana ary avy amin'izay azontsika atao:
Mamorona vondrona vaovao.
Midira amin'ny mombamomba anay sy ny toerana misy anay.
Midira fampandrenesana amin'ny browser
Hizaha ireo fifandraisana voasakana.
Hizaha chat voatahiry.
Izy io dia manana ny zavatra rehetra tianay hojerena amin'ny fampiharana tsy miankina tanteraka avy amin'ny finday. Ny mampalahelo dia ny tsy maintsy ampifandraisintsika amin'ny finday.
Fampiharana hampiasa WhatsApp amin'ny Mac
Raha miankina amin'ny finday sahady dia efa toa enta-mavesatra be ny miankina amin'ny browser ihany koa fampiharana ho an'ny Mac izay ahafahantsika mifandray amin'i WhatsApp Web. Ny tombony lehibe amin'ny fampiasana rindranasa fa tsy ny mpitety dia ny mavesatra kokoa ny fampiharana, ary koa ny fampandrenesana mazàna miasa kokoa. Miankina amin'ny navigateur ary raha manana ny tabilao tranokala WhatsApp any aoriana isika dia afaka mahazo fampandrenesana amin'ny fotoana tsy mety, izay amin'ny tranga tsara indrindra dia hampandre izany amin'ny finday alohan'ny amin'ny solosaintsika.
Kely dia kely ny milaza momba an'io karazana fampiharana io. Ireo rehetra nanandramako dia nitovy tanteraka tamin'ny tranokalan'ity serivisy WhatsApp ity, miaraka amin'ny fahasamihafana fa ho hitantsika amin'ny varavarankely misaraka izay ahafahantsika manova ny habeny ihany koa araka izay tiany. Ny tsara indrindra andrana nataoko, betsaka kokoa noho ny fahalalahana noho ny zavatra hafa rehetra, dia ChitChat (azo avy amin'ny HERE).
Tsy misy isalasalana, ChitChat es ny zavatra akaiky indrindra ho hitantsika amin'ny fametrahana WhatsApp amin'ny Mac.
Fanitarana ny browser hampiasa WhatsApp
Safidy iray eo anelanelan'ny fampiasana ny tranokala ary ny fampiharana dia ny fametrahana extension amin'ny browser. Marina fa akaiky kokoa ny safidy voalohany izy io noho ilay faharoa, saingy mahazo aina kokoa izy io. Misy ny fanitarana sasany izay mampiseho ny isan'ny hafatra amin'ny sariny aza, saingy tsy misy (farafaharatsiny ao amin'ny faritra ofisialy) ho an'ny Safari.
Ho an'ny Firefox dia nanandrana sy tiako ny WhatsApp Desktop. Ho an'i Chrome, iray amin'ireo tsara indrindra sy be mpijery indrindra dia ny WhatsApp Compact, saingy fanitarana izay tsy mbola nanandramako manokana (tsy nampiasa Google Chrome efa ela aho).
Fehiny: mendrika apetraka amin'ny WhatsApp ve ny WhatsApp?
Araka ny nolazaiko teo am-piandohan'ity lahatsoratra ity dia tsy mankasitraka ny fomba nanaovan'i WhatsApp zavatra aho, fa tsara kokoa ny manana fitaovana web toy izay mampiasa finday hifandraisana amin'ireo mpifanerasera amintsika. Etsy ankilany, toa hiaraka amintsika hatrany ny olana satria mampiasa protokol efa lany andro ny WhatsApp. Na dia afaka mamerina manoratra ny rindranasa hatrany amin'ny 0 aza izy ireo.
Hisy ve a fampiharana hametrahana WhatsApp amin'ny Mac teratany?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » maro » Ahoana ny fametrahana WhatsApp amin'ny Mac
Angel Vicedo Davo dia hoy izy:
Ampidino ny App Franz ary manana WhatsApp ianao ary maro hafa !!
Valiny tamin'i Angel Vicedo Davo
oscar treviño dia hoy izy:
3 volana no nampiasako azy tsara be
Mamaly an'i oscar treviño
Mampiasa FreeChat ho an'ny WhatsApp aho no tsara kokoa !!
Manana mac os 10.6 aho… misy safidy hafa ve amin'ity kinova ity? MISAOTRA
Seattle Miaraka amin'ireo tanànan'ny Apple Maps miaraka amin'ny fampahalalana momba ny zotram-pitateram-bahoaka